INew Zealand ijolise kwiipesenti ezingama-90 zokugonya ukuphelisa izithintelo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziNtsha zaseNew Zealand » INew Zealand ijolise kwiipesenti ezingama-90 zokugonya ukuphelisa izithintelo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba eziNtsha zaseNew Zealand • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Abantu abagonywe ngokupheleleyo baya kukwazi ukuphinda baqhagamshelane nosapho kunye nabahlobo, baye kwiindawo zentselo nakwiindawo zokutyela kwaye benze izinto abazithandayo ngokuqiniseka nangokuzithemba okukhulu.
INew Zealand iya kuphelisa izithintelo ze-coronavirus xa izinga lokugonya lifikelela kuma-90 ekhulwini.
Okujoliswe kuko kuqinisekisa ukusasazeka okuhle kwengingqi kwilizwe lonke kwaye kuya kunceda ukujongana nemiba yolingano kwingingqi nganye.
Inkululeko eninzi abanayo abanye abayi kuyifumana abantu abangekagonywa.
Ngoku ka Nyu Zilend Inkulumbuso uJacinda Ardern, kuya kuthatha i-90% yezinga lokugonywa kwabantu ukuphelisa izithintelo ezingqongqo ze-COVID-19 elizweni.
“Ummiselo wama-90% wogonyo olupheleleyo kuwo wonke ummandla weBhodi yezeMpilo yeSithili (DHB) ubekwe njengenyathelo elibalulekileyo lokuqalisa ukuhambisa ilizwe kwinkqubo entsha. Oku kujoliswe kuko kuqinisekisa ukusasazwa kakuhle kwengingqi kwilizwe liphela kwaye kuya kunceda ukulungisa imiba yolingano kwingingqi nganye,” IArdern utshilo kwingxelo ekhutshwe namhlanje.
“Abantu abagonywe ngokupheleleyo baya kukwazi ukunxulumana kwakhona nosapho kunye nabahlobo, baye kwiindawo zentselo nakwiindawo zokutyela kwaye benze izinto abazithandayo ngokuqiniseka nangokuzithemba okukhulu. Umgaqo-sikhokelo omtsha we-COVID-19 woKhuselo ubeka indlela eya phambili enomvuzo kwinani elanda ngokukhawuleza labantu abagonyelweyo baseNew Zealand ngenkululeko engakumbi yokuhamba ngobomi babo ngokukhuselekileyo, ” IArdern wongezwa.
Okwangoku, ama-86 ekhulwini Nyu ZilendAbantu bafumene idosi yokuqala yesitofu sokugonya i-COVID-19, ngelixa malunga ne-69% begonyiwe ngokupheleleyo.
"Ukuba awugonywanga, awuzukuba semngciphekweni wokubamba i-COVID-19, kodwa uninzi lwenkululeko eyonwabela abanye ayizukufumaneka, utshilo u-Nkulumbuso u-Ardern.
Nyu Zilend barekhode iimeko ezili-134 ezintsha ze-COVID-19 kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo, elona nani liphezulu losuku olunye ukusukela oko waqala ubhubhane.
Ngoku ka Nyu ZilendUmphathiswa wezempilo, ilizwe libhalise iimeko ezingama-5,449 ze-COVID-19 kunye nokusweleka kwabantu abangama-28 ukuza kuthi ga ngoku.